ब्लग लेखेर पर्शुराम वस्नेतको दह्रो गाली खाएको छु-गोविन्द बानियाँ - MeroReport
ब्लग लेखेर पर्शुराम वस्नेतको दह्रो गाली खाएको छु-गोविन्द बानियाँ
म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा जन्मिहुर्की काठमाण्डौलाइ कर्मथलो बनाएका गोविन्द बानियाँ केही समय अघिसम्म पुर्णकालिन पत्रकारका रुपमा परिचित थिए । हाल पत्रकारिताले मात्रै गर्जो टर्ने नदेखि ब्यापारमा समेत हात हालेका उनी आफ्नो नफेरिने एकमात्र परिचय भनेको ' वुवा बुद्दि बहादुर बानियाँ तथा आमा राधिका बानियाँको एकमात्रै छोरा' भएको बताउँछन् । कलमजी नामको ब्लगबाट ब्लगिङमा सक्रिय गोविन्द सोसल मिडियाका चर्चित प्लेटर्महरु फेसबुक र ट्विटरमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा यसपाली हामीले उनै गोविन्द बानियाँलाइ प्रस्तुत गरेका छौँ । प्रस्तुत छ बानियाँसंग गरिएको कुराकानी:
गोविन्दजी, नाम बाहेक आफ्नो अरु परिचय अलिकति बताइदिनुस न ।
अहिले म पत्रकारितासंगै ब्यापार पनि गर्छु । मैले सानै उमेरबाट पत्रकारिता शुरु गरेको हुँ र पत्रकारिता थालेको ६ बर्ष भइसकेको छ । न्युज २४ टेलिभीजन एभीन्युज टेलिभीजन र अरु काठमाडौँकै रेडियोहरुमा काम गरिसकेँ । अहिले अमेरिकाबाट प्रसारण हुने ह्वाईट हिमाल टेलीभिजनको नेपाल ब्युरोमा काम गर्छु । व्यापारको कुरो गर्दा, पिएभी मिडिया नामको संस्था चलाउँछु, ईलेक्ट्रोनिक सामान, कम्प्युटर आदी ईत्यादी सप्लाई सम्बन्धि काम पनि गर्छु । त्यसैले अहिले नेपालडेलीभरी डटकम नामको साईटबाट अरु सामान पनि बेचिरहेको छु ।
ब्लगिङ समय हुँदा गर्ने कुरो हो । पेशागत रुपबाटै लाग्नेहरु कमै छन् । ब्लगरै भन्दा पनि आफूलाई सोसल मिडिया युजर भन्न रुचाउँछु ।
आफ्नो ब्लगको बारेमा थोरै शब्दचित्र प्रस्तुत गरिदिनुस् न ।
मैले २०१० देखी ब्लग लेख्न थालेँ, त्यतिबेला आफैले लेखेका समचारहरु पोस्ट गरिन्थ्यो । पछी ३-४ महिना छोडेँ । मेरो ब्लग यो मात्रै पनि होईन, थुप्रै ब्लग दर्ता छन् । कतिमा परिचय सबै लुकाएरै गरिरहेको छु । कसैले चिन्दैनन् तर धेरैले हेर्छन् । कलमजि भन्ने ब्लग चाँही मैले नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा प्रकाशित गरेको छु । यसमा नेपालीमा लेखिने प्राय: सबै समाचार वा विचारहरु नै हुन्छन् भने अङ्ग्रेजीमा, सोसल मिडिया, कम्प्युटर लगायत अरु ईन्टरनेट सम्बन्धी जानकारी पोष्ट गर्ने गर्छु ।
समय हेरेर फरक फरक कारणले गरिन्छ ब्लगिङ् । कहिले आफ्ना विचार पोख्न कहिले प्रचार प्रसारका लागि त कहिले रमाईलोको लागि । अर्को, लुकेको कुरो चैँ पैसा कमाउन पनी ब्लगिङ् गरिन्छ है !
राजनिति, साहित्य र सोसल मिडिया । पत्रकारिता गरिरहेकाले राजनितिलाई नजिकबाट चिन्छु अनी लेख्न मन लाग्छ । मैले लेखेका लेखहरु आइरहेका हुन्छन् अरु न्युजसाईटहरुमा पनि । साहित्य र सोसल मिडिया रुचिको विषय जो भैहाल्यो ।
मानिसहरु ब्लगिङ गर्न रहर त धेरै नै गर्छन, तर ब्लगलाइ चर्चित बनाउन त गाह्रो छ नि है?
ब्लगलाई चर्चित त्यसमा पोष्ट गरिने कन्टेन्टले बनाउने हो । कन्टेन्ट राम्रो भए चर्चित बनाउन त्यती गाह्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई ।
साहित्य, कला, सुचना/समाचार, प्रविधि, लगायतका बिषयपिच्छे धेरै नै ब्लगहरु पाइन्छन तर धेरैजसो ब्लगहरु गुणस्तरिय भन्दापनि खै के के नमिलेको हुन्छ भनेर सामाजिक संजालमा आलोचना पनि हुन्छ ब्लगरको । किन होला?
एक लाख जनाको मासमा कोहीपनि चिटिक्क मिलेको त हुँदै हुँदैन नि । सबै मिल्ने हो भने त एउटै ब्लग भए भईहाल्थ्यो नि । हो सहि कुरो के हो भने ब्लग लेख्न धेरैले सिक्दैछन्, अहिलेकै समयमा पनि । सानो वच्चाले लेखेको कपुरी ‘क’ कस्तो हुन्छ?
पत्रकारिता र साहित्य ।
ब्लगिङ् गर्न रहर गर्ने कुनैपनि ब्लगरले सबैभन्दा पहिला जान्नै पर्ने कुराहरु के के हुन?
आफ्नो ब्लगलाई आकर्षक बनाउन । अरुका ब्लग पढ्न, भाषा मिलाउन, प्लगिन वा अरु टुल्सको सदुपयोग गर्न र मुख्य कुरो कन्टेन्ट लेख्न जान्नैपर्छ ।
सोसल मिडया र ब्लगलाई पत्रकारिताको एउटा टुल्स मानेको छु । सोसल साईटमा अपडेट भएपछि फिल्डमा पुग्ने गरिन्छ धेरै समयमा । कहिले आफुले अपडेट गरेर अरुलाई सजिलो पारिन्छ । अर्को सोसल साईट्स र ब्लगको राम्रो कुरो भनेको सहयोग संकलन पनि हो । जस्तै टिएफसी ।
समय भएसम्म ईन्टरनेटमा ब्लग नै पढ्छु । नेपाली ब्लगहरुमा नियमित लेखिने ब्लग सबै पढिन्छ। नामै लिँदा माईसंसार, आकारपोस्ट, नेपालीब्लगर, कुलरिम्सका मौसमी ब्लगहरु पनी, लेन्दाईका मर्मस्पर्शि ब्लगहरु पनी, अरु अरु.... । मैले सबैभन्दा बढी पढ्ने र दिनमा १ पटक नखोले खल्लो लाग्ने ब्लग भनेको Mashable.com हो ।
साहित्य र सोसल मिडिया ब्लग मेरो पहिलो रोजाई हो । साहित्यमा पनि गजल, मुक्तक र कविता राखिएका ब्लगहरु पढिन्छ ।
अँ, यो निकै महत्वपुर्ण कुरो हो । आचारसंहिता सबैलाई जरुरी छ । फेसबुक, ट्विटर चलाउनेहरुका लागी पनि आवश्यक छ । हो एउटा निश्चित नियम भयो भने अति उत्तम हुन्छ, ब्लगरका लागी ।
मान्छे अनुसारका ब्लग हुन्छन् । अलीकती चर्चामा आएका वा सामाजिक स्टाटस भएकाहरुले गरिरहेकै हुन्छन् आधारभुत कुरामा तर आचारसंहिता नै नभएको अवस्थामा आफूलाई ठिक लागे त्यही आचारसंहिता भयो होईन र?
मैले ब्लग लेखेर पर्शुराम वस्नेतको दह्रो गाली खाएको छु । खिलनाथ ढकालमाथी आक्रमणको बिषयमा एउटा न्युजसाईट्स मै विचार लेखेँ । आफ्नो ब्लगमा पनी हालेँ । हेरेछन् वा कसैले खबर पुर्‍याइदियो, फोन गरेर बेसरी गाली गरे डर लाग्यो, पछी डिलिट गरेँ । जेनियुन विचारमुलक ब्लगिङ्ग गर्दा सुरक्षा पहिलो चुनौती हुन जाँदोरैछ । एकजनाले चाँही ट्विटरमा धेरै लिंक सेयर गरिस् भनेर अनफ्लो गरे । समय पाउँदा लेखिन्छ सेयर पनि गरिन्छ, त्यस्तो कुरामा किन अनफलोनै गर्नुपर्त्यो र ?
तपाइ सोसल मिडियामा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ, हामीकहाँ प्रयोगमा आइरहेका सोसल मिडियाका थलोहरु: ब्लग, ट्वीटर र फेसबुकमा के फरक पाउनुभयो?
सबै उस्तै हुन्, पोस्ट गरेको दुई सेकेन्डमै कपी भएर जान्छन् । ब्लगमा कपी हुनबाट वचाउन सकिन्छ । ट्विटर र फेसबुकमा सकिन्न । नेपालको सन्दर्भमा प्रयोगको हिसावले फेसबुक गाऊँशहरका सप्पैले चलाउँछन् । मेलापात सबै अपडेट गर्छन्, तर ट्विटरमा अलीकती आदर्शका कुरा बढी हुन्छन् । बनावट कार्यका हिसावले तिनवटै फरक फरक छन् ।
धेरैले लेख्छन् । त्यसमा पहिलो उदाहरण माईसंसार हुनसक्छ । त्योवाहेक अरुले पनी छन् ।
तपाईँको सबैभन्दा बढी रुचाइएको ब्लग कुन हो?
ब्लग, ईन्टरनेट वा समाचार जेमा पनि मान्छेले रुचाउने, सेक्स, सिनेमा र क्राईम हो । मेरो सेक्ससंबन्धी जानकारिमुलक ब्लग बढी चर्चित रह्यो दोस्रो भन्ने हो भने, म्याग्दी वेनी आक्रमणसंबन्धी संस्मरण पनि ।
ब्लगिङ गरेर के यो पाएँ वा यो गुमाएँ भन्ने केही छ?
ब्लगिङ् गरेर त यी, पाईहालेँ नी साताको ब्लगर बन्न । गुमाउन त के गुमाएको आभाष हुन्छ होला र मन परेको चिज गर्नलाई ! ​पाएको अर्को कुरा भनेको देशवाहिरका ब्लगरहरुसंगको सम्बन्ध हो । यसले गर्दा कती अवस्थामा मैले उनीहरुका ब्लगमा गेस्टपोस्ट पनि लेख्न पाएको छु । उनीहरुले पनि पठाउँछन् मैले पनि राख्दिन्छु । ​
खासमा यसको प्रभावलाई मुल्याङ्कन गर्ने हो भने मान्न सकिन्छ । तर ठ्याक्कै नागरिक पत्रकारिता चैँ होईन कि !
मेरो रिपोर्टको सबैभन्दा दरिलो पक्ष भनेको ब्लगरहरु विच परिचय गराउनु हो जस्तो लाग्छ । यसलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ । यसवाहेक नागरिक पत्रकारितालाई स्थापित गराउने मेरोरिपोर्ट लक्ष पनि प्रसंसनिय छ । मौसमी नबनोस्, शुभकामना । साथै मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद पनि । ​
Comment by Simanta Marasini on June 19, 2013 at 1:55pm
Comment by Santosh Neupane on June 14, 2013 at 3:57pm
धेरै धेरै बधाई छ मेरो तर्फबाट पनि !!!!
Comment by अल्टर कान्छो’ on June 13, 2013 at 5:05pm
बधाई छ मेरो तर्फबाट पनि
Comment by Prakash Lamichhane on June 12, 2013 at 3:00pm
बधाइ छ है धेरै धेरै :)